अस्तब्यस्त घोराही | Epradesh Today
घोराही, ४ चैत । पछिल्लो समयमा सडक व्यस्त बन्दै गएको छ । बढ्दै सवारी साधनको चाप र व्यस्त शहरीकरणको कारण घोराही बजार व्यवस्थित बन्न सकेको छैन अस्तव्यस्त छ ।
बजारमा मुख्य चोकमा रहेका ठेला व्यवसाय, फुटपाथ व्यापारलाई अझै व्यवस्थापन गर्न सकिरहेको छैन् । त्यति मात्रै होइन् घोराही बजारका मुख्य चोकहरुमा छाडा चौपायाको बिगबिगी पनि उस्तै छ ।
केही दिन पहिले बजारलाई व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले ठेला तथा सडक व्यापार हटाउनको लागि ट्राफिक प्रहरीसमेत परिचालन गरियो । केही ठेला तथा फुटपाथ व्यापारहरुलाई हटाइयो भने केहीले आफै हटाउने सर्तमा छोडियो ।
जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख मदनबहादुर कुँवर, स्थानीय प्रतिनिधि र घोराही उपमहानगर बजार व्यवस्थापन समितिका सदस्यहरुसमेत पुगेका थिए । तर बजार व्यवस्थापन सफल हुन सकेन् । सोही दिन साझ फेरी उसैगरी घोराहीमा फुटपाथ र ठेला व्यवसायहरु देखिए ।
घोराही उपमहानगरपालिका र जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले ठेला व्यवसाय र सडक व्यापारीहरुलाई व्यवस्थित गर्न नसक्नुको परिणाम हो । घोराही उपमहानगरपालिकाले पटक–पटक सडकमा ठेला हटाउन तथा फुटपाथ व्यापार नगर्न निर्देशन दिईरहेको छ ।
कति पटक त प्रहरी परिचालन गरेर ठेलाहरु हटाइएका छन् भने सडक व्यापारहरु उठाइएका छन् । तर ति समस्या जस्ताका तस्तै छन् । घोराहीका विभिन्न बजारमा फुटपाथ र ठेलामा व्यवसाय गर्नेहरु कुनै अवस्थामा आफूले गर्दै आएको ठाउँमा व्यापार नछोडने अडानमा देखिन्छन् ।
घोराहीका विभिन्न बजारमा फुटपाथ र ठेलामा व्यवसाय गर्नेहरु कुनै अवस्थामा आफूले गर्दै आएको ठाउँमा व्यापार नछोडने अडानमा देखिन्छन् । कि त घोराही उपमहानरपालिकाले नै व्यापार गर्नको लागि उचित व्यवस्थापान आफै तोकी दिनुप¥यो होइन् भने फुटपाथमै व्यापार गर्न दिनुपर्नेमा विकल्प देखिदैन् ।
कि त घोराही उपमहानरपालिकाले नै व्यापार गर्नको लागि उचित व्यवस्थापान आफै तोकी दिनुप¥यो होइन् भने फुटपाथमै व्यापार गर्न दिनुपर्नेमा विकल्प देखिदैन् । ‘पहिले पनि ठेला हटाउनको लागि धेरै दबाव आइरहेको थियो, एकदिन आउँछन्, ठेला तितर–वितर पारिदिन्छ,
अर्को दिनबाट फेरी उस्तै भईहाल्छ’ घोराही तुलसीपुर चोकमा ठेलामा व्यवसाय गर्दै आएका राजन केसीले भने । यहाँबाट ठेला लगेर कहाँ व्यवसाय गर्ने ? त्यतिकै हटाउन भनेर मात्रै हुन्छ र ?’ उनले आक्रोसित हँुदै थप्छन् ।
‘पैसा भएको भए त सडकमा आएर को व्यवसाय गथ्र्यो र ? सटर खोलेर सानसँग व्यवसाय गर्थिम’ तुलसीपुर चोकमै सडक व्यापार गर्दै आएकी लिलावती नेपाली भनिन् । ठेला तथा सडक व्यापार गर्नको लागि बैकल्पीक व्यवस्था नहुँदासम्ममा सडकमै व्यापार गर्ने उनी बताउछिन् ।
‘सडक व्यवस्थित गर्नको लागि हामीले अव्यवस्थित रुपमा रहेका ठेला व्यवसाय तथा फुटपाथहरुलाई हटाउन अनुरोध गरेका छौँ घोराही उपमहानगरपालिकाका प्रमुख चौधरीले भने ‘अब पनि अटेर गर्ने हो भने कारवाही गर्छौ ।
अहिले घोराही उपमहानगरपालिका र जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको ध्यान घोराहीका सडक व्यापार र ठेला व्यवसायमा देखिएको छ । ति बाहेक घोराही बजारका सडकसम्म हार्डवेयरका सामानहरु सरिया, फलाम, ड्रमलगायतका सामानहरु राखिएको हुन्छ । त्यसप्रति ध्यान गएको छैन् ।
त्यस्तै आधा सडकसम्म खाली ग्याँसका सिलिण्डरहरु राखिएका छन् । प्लाष्टिकका भाडाहरु यत्रतत्र राखिएका छन् । जसले गर्दा सडक नै साँघुरो भएका छन् । घोराही उपमहानगरका प्रमुख नरुलाल चौधरीले अव्यवस्थित रुपमा रहेका ठेला तथा सडक व्यापार हटाउनको पहिलो पटक सूचना तथा चेतावनी दिएको बताए । पटक–पटक पनि सूचना नमानेर अटेर गर्नेलाई कानुनी अनुसारको कारवाही गरिने उनले बताए ।
जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख मदनबहादुर कुँवरले क्रमिक रुपमा सडक व्यवस्थापन गरिने बताए । ‘हामीले चार÷पाँचवटा ठेलाहरु नियन्त्रणमा लिएका छौँ, कसैलाई जरिवाना काटेका छौँ’ ट्राफिक प्रहरी प्रमुख कुँवरले भने ‘केही अटेरीहरुले विस्तारै कानुनी कारवाहीमा ल्याउछाँै ।’
ठेला तथा फुटपाथ व्यवसायहरुलाई घोराहीको सभागृह आसपास, टाफिक चोकलगायतका क्षेत्रहरु तेकिएको उनले बताए । सवारी दुर्घटना हुनसक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै घोराही उपमहानगरपालिका र जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय घोराहीले ठेला हटाउने योजना बनाएका छन् ।